सोसल मिडियामा श्रीमतीको बिकिनी फोटो देखेर संजय दत्त आगो भए - TV Annapurna
सोसल मिडियामा श्रीमतीको बिकिनी फोटो देखेर संजय दत्त आगो भए
सोसल मिडियामा श्रीमतीको बिकिनी फोटो देखेपछि संजय दत्त रुष्ट बनेका छन् ।
फिल्म ‘भूमि’ बाट बलिउडमा कमब्याक गरिरहेका संजय श्रीमतीसँग रुष्ट बनेका हुन् । उनले यसका लागि श्रीमती मान्यतालाई चेतावनी पनि दिएका छन् । स्मरण रहोस्, केही दिन अघि मान्यताले आफ्नो इन्स्टाग्राममा बिकिनी लगाएका थुप्रै हट फोटो सेयर गरेकी थिईन् ।
वान सोल्डर रेड बिकिनी लगाएर सेयर गरिएको फोटो बी–टाउनमा टकिङ पोइन्ट बनेको छ । खबरलाई मान्ने हो भने यी सबैका कारण संजय तनावमा छन् । उनले मान्यतालाई अबदेखि त्यस्तो नगर्न पनि चेताएका छन् ।
एक साथीले संजयलाई सोसल मिडियामा मान्यताको बिकिनी तस्बिरका कारण विभिन्न कुराकानी भइरहेको बताउँदै मान्यताले यस्तो प्रकारको फोटो सेयर गर्न नहुने बताएपछि संजय दत्त तनावमा भएको बताइन्छ ।
मान्यताले फिल्म निर्मातालाई आकर्षित गर्नका लागि फोटो सेयर गरेकी हुन् ता कि उनले दोस्रो पटक बलिउडमा प्रवेश पाउन सकून् । जबकी संजय दत्त यो कुरामा कहिले पनि सहमत हुने छैनन् ।
तपाई टिभी अन्नपूर्ण एण्ड्रोईड, आईओएस, मार्फत मोबाईल सेटमा र विण्डोज मार्फत तपाईको स्मार्ट टेलिभिजनमा २४सै घण्टा हेर्न सक्नुहुनेछ । साथै फेसबुक र ट्वीटरमा पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ । अर्काईभ कार्यक्रमका लागी टिभी अन्नपूर्णको युट्युव सब्सक्राईब गर्नुहोस् । एकैसाथ समाचार पढ्न, सुन्ने र हेर्ने नेपालकै पहिलो अनलाईन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण ।
चीनको तिब्बत एयरलाइन्सले काठमाडौं–सिआन सिधा उडान थाल्यो
नबिल बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
मिस्टर झोलेको ६ दिने ग्रस कमाइ (बक्सअफिस सहित)
दयाहाङ राई स्टार रहेको मिस्टर झोलेले ६ दिनमा २ करोड ४८ लाख ग्रस कमाइ गरेको छ ।...
‘पिँजडा ब्याक अगेन’ प्रिमियरमा निखिल–सारा आकर्षण
निखिल उप्रेतीको स्टार र एक्सन ड्रामा पिँजडा ब्याक अगेनको रेडकार्पेट प्रिमियर बुधबार काठमाडौंमा भएको छ ।...
कोसँग गर्दैछन दोस्रो विहे ऋतिक रोशनले
बलिउड एक्टर ऋतिक रोशनले दोस्रो विहे गर्ने भएका छन । भारतीय मिडियाका अनुसार २०१८ भित्रै ऋतिकले...
मिस्टर झोलेको कमाइ सुखद्, तीन दिनमा कति कमायो ?
दयाहाङ राई र दीया पुन स्टारर मिस्टर झोलेले दुई दिनमा सुखद व्यापार गरेको छ । निर्माता...
बलिउडमा फेरि अर्की ‘२६ वर्षे स्टार’को प्रवेश
निर्देशक रामगोपाल बर्मा अहिले नयाँ फिल्म ‘गड सेक्स एण्ड ट्रुथ’को सुटिङमा ब्यस्त छन् । यस फिल्ममा...
मिस्टर झोले बक्सअफिसमा प्रभावशाली, प्लेक्स र सिंगल दुबैमा अकुपेन्सी उच्च
दयाहाङ राई र दीया पुन मल्टिस्टारर सिनेमा मिस्टर झोलेले घरेलु बक्सअफिसमा उत्साहजनक ओपनिङ गरेको छ ।...
दक्षिण एसियाली हस्तकला महोत्सव शुरू,नेपाली कालीगढहरूको सिर्जनालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य
गरीबी निवारण कोष, नेपालले आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली हस्तकला महोत्सव शुक्रवारबाट काठमाडौंमा शुरू भएको छ ।...
चर्चित लाेकदाेहाेरी गायिका दिलु फगामी मगरकाे “जन्म ठाउँ तिर” बजारमा
अमृत शर्मा पाेखरेल, टिभि अन्नपूर्ण । बिगत लामाे समयदेखि लाेक संगीतकाे क्षेत्रमा संघर्षरत चर्चित लाेकदाेहाेरी गायिका...
किन निस्किए माग्नेबुढा छक्कापञ्जा को समूहबाट ? कारण यस्तो रहेछ
चर्चित हाँस्य कलाकार केदार घिमिरे उर्फ माग्ने बूढा पहिलो पटक ‘छक्का पञ्जा’ टिमबाट बाहिर निस्केका छन्...
डा. केसीलाई रिहा गर्न माग गर्दै सडकमा उत्रिए कलाकार
डा. गोविन्द केसी पक्राउको विरोधमा सिनेमा कलाकार समेत सडकमा उत्रिएका छन् । मंगलबार बिहानै उनीहरु माइतीघर...
January 06, 2018 TV-Annapurna 0
को सँग विहे गदैंछन नायिका स्वेता खड्का
पति नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको मृत्युपछि बिक्षिप्त बनेकी स्वेता खड्का फेरि लयमा फर्किन थालेसँगै उनको अर्को विहेको...
January 04, 2018 TV-Annapurna 0
‘कान्छी’को शिर्ष गीत सार्वजनिक, हेर्नुहोस् यस्तो बन्यो भिडियो
वर्ष २०७४ को प्रतिक्षीत फिल्मको रुपमा हेरिएको ‘कान्छी’को शिर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘चरी चट्ट...
January 03, 2018 Annapurna TV 0
साहित्यकार कृष्ण धरावासीलाई डेढ लाख धनराशीको पुरस्कार
अमेरिकामा वितरण गर्न लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा साहित्य पुरस्कार साहित्यकार कृष्ण धरावासीलाई प्रदान गरिने भएको छ ।...
January 01, 2018 Annapurna TV 0
विवहाको ६ महिनामै निशा अधिकारी कसरी बनिन् आमा
चलचित्रकी नायिका निशा अधिकारीले आफ्नो फेसबुकमा विहेको ६ महिनामै आमा बनेको विषय सार्वजनिक गरेपछि यसको सामाजिक...
December 28, 2017 TV-Annapurna 0
तपाईले हेर्नुभयो ? यि हुन बलिउडमा २०१७ का १० उत्कृष्ट बलिउड चलचित्र
भारतीय चलचित्र उद्योग बलिउडमा वार्षिक सयौं फिल्म रिलिज हुन्छन् । तीमध्ये केही फिल्मले बक्सअफिसमा धमाकेदार...
December 28, 2017 Annapurna TV 0
भोज लगत्तै ‘दोस्रो हनीमून’ का लागि निस्किए विराट र अनुष्का
बुधबार राति विराट कोहली र अनुष्का शर्मा मुम्बइको एयरपोर्टमा देखा परे । उनीहरु दुवै साउथ अफ्रिका...
बलिउडका चर्चित नायक सलमान खानको जीवनी यस्तो छ
हिजो बलिउड सुपरस्टार सलमान खानले आफ्नो ५२ औं जन्मदिन सेलिव्रेट गरेका छन् । सलीम खान सुशीला...
December 27, 2017 TV-Annapurna 0
बाग्लुङका निउरेको गित धम्जा गाँउमा (भिडियो सहित)
बाग्लुङको धम्जाका प्रतिभाशाली कलाकार सुदिप निहुरेको शब्दमा बाग्लुङको धम्जा गाँउमा बोलको गीत बजारमा आएको छ ।...
December 27, 2017 Annapurna TV 0
मनिल चौधरी बने गे ह्यान्डसम नेपाल उपाधिका भागीदार
मनिल चौधरी मिस्टर गे ह्यान्डसम नेपाल बनेका छन् । १५ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै मनिल २०१७ का लागि...
December 22, 2017 TV-Annapurna 0
संजय दत्त र ऋषि कपुरबीच किन भएको थियो झगडा ? हेर्नुहोस् कारण यस्तो छ
ऋषि कपुरले आफ्नो अटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्लामा केही यस्ता रहस्हयरु खोलेका थिए जसले बलिउडमा तहल्का मच्चाएका थिए...